ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်အား တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဌာန ဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
တွေ့ဆုံပွဲတွင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံ မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပါတီအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိစ္စများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ အတူလက်တွဲ ဆောင်ရွက် သွားရေး ကဏ္ဍစုံနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စများကို ရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်နိုင်သိန်း၊ တွဲဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသက်နိုင်ဝင်းနှင့် ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးများ၊ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီမှ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာန ဝန်ကြီး H.E.Mr. Song Tao ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Hang Liang ၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mme.Roa Huihua နှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
← မြိတ်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဌ ပင်းအိုကျေးရွာအုပ်စု ပါတီဝင်များနှင့်ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံ
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်နိုင်သိန်းအား တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန ဝန်ကြီး H.E Mr. Song Tan နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ →